सौर्यऊर्जा प्राकृतिक “टनिक” « Sadhana
आफ्नो सफल प्रयोगबाट मानेक झनै प्रेरित भए । डाक्टरहरुको सुपरीवेक्षणमा उनी पुनः पहिलेको जस्तै गरी सौर्य ऊर्जा ग्रहण गरेर सन् २००० जनवरी १ देखि सन् २००१ फेब्रुअरी १५ सम्म ४११ दिन उपवास बसे । डा. सुधीर शाह र डा. के.के. शाहको नेतृत्वमा २१ चिकित्सक एवं वैज्ञानिकको अन्तर्राष्ट्रिय टिमले उनको सुपरीवेक्षण गरेको थियो । उपवासको क्रममा डाक्टरहरुले उनको स्वास्थ्यलाई पूर्णरुपले स्वस्थ र रोगमुक्त भएको पाए । सो अवधिमा उनलाई कुनै रोग लागेन । उनका सबै शारीरिक अंगहरुले ठीकसँग कार्य गरिरहेका थिए । ६५ वर्षको उमेरमा पनि उनको शरीरमा न्युरोन निर्माण (ल्भगचयल ायचmबतष्यल) भएको पाइयो । यही उपवासको क्रममा उनले पालिताना तीर्थको झन्डै ३ हजार ५ सय सिँढी सहजै चढेर डाक्टरहरुलाई चकित पारे । यस सन्दर्भमा उनको विवरण गुजरात मेडिकल जर्नलको मार्च २००१ अंकमा समेत प्रकाशन भएको थियो ।